२०७७ कार्तिक ११ मंगलबार २०:०२:००
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले सदरमुकाममा मात्रै प्रभावकारी परीक्षण गर्ने हो भने ४० देखि ५० प्रतिशतमा संक्रमण देखिन सक्ने आशंका गरेको छ । प्रशासनले अत्यावश्यक कामबाहेक कात्तिक १५ सम्मका लागि सबैखाले आवतजावत बन्द गरेको छ ।
११ वटा पालिकाका बजार केन्द्रहरू बन्द गरेको छ । मास्क नलगाएर सदरमुकाममा हिँडडुल गर्नेलाई पक्राउ गर्ने काम थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
दसैँको अवसरमा दुई दिन बन्द भएको परीक्षण कार्य पुनः सुरु गरिएको छ । कोरोना परीक्षणको रकम तोकेपछि परीक्षण गर्नेहरू ह्वात्तै घटेका छन् ।
प्रशासनले समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका गरेको छ । सदरमुकाममा मात्रै एक सय ५० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगेका छन् । कडा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्थाका बिरामी बढ्दै गएको डा. पन्तले बताए ।
यी पेसाकर्मीमा बढी संक्रमण
सदरमुकाम दैलेख बजारभित्रै सक्रिय काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, होटेल व्यवसायी र व्यापारीलाई कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले उच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ । प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई केहीबेर नियन्त्रणमा लिने र छोड्ने अभियान चलाएको छ ।
दैलेखमा १४ स्वास्थ्यकर्मी, १५ सुरक्षाकर्मी, तीन सञ्चारकर्मी, २० होटेल व्यवसायी र २० जना व्यापारीलाई पछिल्लो एक सातामा संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोना परीक्षणमा शुल्क लाग्ने भए पनि परीक्षण गर्ने घटे
दैलेखमा सञ्चालन रहेको पिसिआर मेसिनबाटै कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेपछि जनशक्ति र अन्य साधनको अभाव भएको भन्दै दैलेखमा निःशुल्क गरिएको कोरोना परीक्षणलाई शुल्क लगाइएको छ ।
‘निःशुल्क परीक्षण थाम्न नसकिने अवस्था भयो, सरकारले तोकेको शुल्क लगाउने तयारीमा छौँ,’ डा. नीरञ्जन पन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गरिब र विपन्न समुदायका मानिसमा लक्षण देखिँदा पनि शुल्क तोकेपछि कोरोना परीक्षण गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै घटेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै कुरा निःशुल्क भनेर घोषणा गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य रवीन्द्रराज शर्माले सांसदको क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत एक करोडभन्दा बढीमा ल्याएको पिसिआर मेसिनले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गरिरहेको छ ।
संक्रमण पुष्टि भएका स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमितको सेवामा
आफैँ संक्रमित भएका स्वास्थ्यकर्मीले उपचारका लागि आएका कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन् ।
लक्षणसहित संक्रमण भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तले पिपिई सेट नलगाएर सामान्य मास्कको भरमा संक्रमितको जाँच गरेर बिरामीलाई उत्साह प्रदान गरेका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले नै बिरामीलाई हेला गऱ्याैँ भने मनोबल झन् कमजोर हुन्छ । त्यसैले दैलेखका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूलाई यसरी नै जाँच गरिरहेका छन् ।’
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखमा कार्यरत दुईजना डाक्टरसहित १४ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् ।
आइसाेलेसन भरियो, विकल्पको खोजी
कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य अमरबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत एक महिनाको अवधिमा तयार गरिएको ५२ शय्याको आइसोलेसन अस्पताल सक्रिय संक्रमितहरूले भरिसकेको छ ।
पुरानो आइसोलेसनको रूपमा निर्माण गरिएका विद्यालय वा अन्य विकल्पबारे जिल्ला दैवी प्रकोप कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिमा छलफल गरिएको छ । महाबु गाउँपालिकामा पनि प्रिफ्रयाव मोडेलमा आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकार डरायो
कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा निकै तामझामका साथ व्यवस्थापनमा खटिएका स्थानीय सरकार समस्या बढ्दै गएका वेलामा भने डराएका छन् ।
सक्रिय संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका वेलामा जनतालाई सचेतना फैलाउने, गरिब र विपन्न समुदायका नागरिकलाई मास्क, स्यानिटाइजर र साबुन वितरण गर्ने, उपचारमा सहयोग पुऱ्याउने गतिविधिमा कमी आएको छ । विगतमा अनावश्यक रूपमा करोडौँ खर्च गरेको नाटक मात्रै भएको स्थानीयको आरोप छ ।
#दैलेख # गाउँ पस्यो कोरोना
दैलेखमा नेपाल टेलिकमको फाइबर अप्टिक सेवा सुरु
नारायण नगरपालिका एक हप्ताका लागि सिल, प्रशासनले पनि अत्यावश्यक सेवा मात्र दिने
नगरप्रमुखसहित १२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि दैलेख बजारमा स्वास्थ्य संकटकालको तयारी
चिकित्सकसहित ११ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि दैलेख स्वास्थ्य कार्यालय सिल